तिहारमा के खाने ? के नखाने ? – Nilo Aakash
निलो आकाश संवाददाता ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १७:२७
रक्सी खान हुन्छ की हुँदैन?ADVERTISEMENT
रक्सी खान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सधैँ अन्यौलता छ । रक्सी सकेसम्म नखाएकै राम्रो हो । स्वस्थ व्यक्तिले न्यूनतम मात्रामा रक्सी खान सक्छ तर न्यूनतम भनेको कति हो? भन्ने कुनै निर्धारण भएको छैन। अनुसन्धानले रक्सीले हानी नै गर्छ भनेको छैन तर स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ भनेर पनि प्रमाणित गर्न सकेको छैन। रक्सीको बेफाइदा नै बढी छ। बढी मात्रामा रक्सी सेवन गरेमा यसले पेनक्रियाज बिगार्छ जसले गर्दा ‘सुगर’को समस्या हुन्छ। यसका साथै, कलेजो बिगार्छ, पेटमा घाउ हुन्छ, रक्तश्राव हुन्छ र दिसामा रगतसमेत देखिन्छ।
तिहारको बेलामा प्रयोग हुने भाई मसला स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। भाई मसलामा केही मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुने भएपनि समग्रमा यसले स्वास्थ्यलाई हानी गर्दैन । सेलरोटी मासु लगायतका खानेकुरा भन्दा बढी भाईमसला स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त छ।
काजु, बदाम, नरिवल, किसमिस, बदाम लगायतका खानेकुराहरूमा शरीरका लागि चाहिने भिटामिन, मिनरलस लगायतका तत्वहरू पाइन्छ । सेतोपाटीबाट